ဝက်ဆိုက်များ စုစည်းမှု့: ရွှေမန်းသားလေး ဝေယံ
ဗုဒ္ဓစာပေများ၊ နည်းပညာစာအုပ်များ၊ သုတ၊ရသ စာအုပ်ပေါင်းစုံကို တစ်နေရာတည်းတွင် ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်ဗျာ...
မြန်မာစာ အထူးပြုကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအတွက် လေ့လာစရာစာအုပ်များကို ဤနေရာတွင် သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါပြီ....
လာရောက်ကြသူများ မင်္ဂလာပါဗျာ.. ကျွန်တော်ရဲ့ ရွှေမန်းသားလေးဆိုက်ကို ယခင်လင့်ဖြစ်သော www.shwemantarlaywaiyan.blogspot.com သာမက www.shwemantarlaywaiyan.co.cc ဖြင့်ရော ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီဖြစ်ကြောင်း....
လာရောက်သူများခင်ဗျာ... ဆိုက်တွင်တင်ထားသော Post များမှ Link များ linkသေခြင်း၊burn ခံရခြင်းများဖြစ်ပေါ်နေပါသဖြင့် အဆိုပါ linkသေများ၊ burn ခံထားရခြင်းမျိုးကြုံတွေ့ပါက Comment များပေးထားခဲ့ပါ။ ကျွန်တော်ပြန်၍ တင်ပေးပါမည်။လာရောက်သူများကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Shwemantarlay Wai Yan
ထိပ်တန်း Android Application Download ဝက်ဘ်ဆိုက် ၁၀ ခု
Android Device တွေမှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Application တွေကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အခမဲ့ ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခမဲ့ ရယူနိုင်တဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေဟာလည်း များစွာပေါ်ထွက်လျက်ရှိနေပြီး ထိပ်တန်း Android Application Download ဝက်ဘ်ဆိုက် ၁၀ ခု အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ...
Virus အကြောင်း E-books များ
Virus နဲ့ပတ်သက်တဲ့ e-book များကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Virus အကြောင်း လေ့လာလိုသူများအတွက် အဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ပါ။ နောက်ပြီး virus အကြောင်း မေးထားတဲ့သူလည်း ရှိလို့ပါ။ နောက်ပိုင်းလည်း ဆက်တင်ပေးသွားမှာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ.... Virus များနှင့် ကခုန်ခြင်းhttp://minus.com/l5BiKETppoU...
The Voice Weekly Vol.8/No.44 Download
ကဲ.... ဒီတစ်ပတ်အတွက် ထုတ်လိုက်တဲ့ The Voice Weekly Journal ကိုတော့ အောက်မှာ သွားယူလိုက်ကြပါဗျ.......
နိုဝင်ဘာလအတွက် ဟောစာတမ်း (ဆရာ အောင်ငြိမ်းမြတ်)
ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ-၏ တပည့်ရင်းဆန်းဗေဒင် အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ လက္ခဏာ ပညာရှင်ဆရာ အောင်ငြိမ်းမြတ်-၏ခုနစ်ရက် သား-သမီးများအတွက် လစဉ် ဟောစာတမ်း( နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀ ) ( တနင်္လာ ) မိတ်ဆွေ ဒီလထဲမှာ လာဘ်လာဘ ရွှင်မယ်။ မျက်နှာပွင့်မယ်။ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ကူညီမှု စောင့်ရှောက်မှု ခံရတတ်တယ်။ သားသမီးသော်၎င်း၊ အောက်လက်ငယ်သားသော်၎င်း သူတို့အတွက် စိတ်သောက ရောက်ရတတ်တယ...
Download Windows 8 Professional Full Version With Product Key
ကဲ... Windows 8 ကိုအသုံးပြုချင်သူများအတွက် ကျွန်တော်လည်း ရှာတွေ့လိုက်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အဆင်ပြေမပြေတော့ ကျွန်တော်လည်း မသုံးကြည့်ရသေးဘူး။ Product Key ပါပေးထားပါတယ်။ အောက်မှာ မူရင်းအတိုင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ....
ဝါလကင်းလွတ် သီတင်းကျွတ်မှာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ...
အားလုံးဘဲ မင်္ဂလာပါဗျာ....မကြာမီရက်များကာလမှာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ပွဲတော်ကာလတစ်ခုဖြစ်တဲ့ သီတင်းကျွတ်ကာလရောက်ရှိတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို သီတင်းကျွတ်ကာလအချိန်ကာလမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရွှေမန်းသားလေးဆိုက်ကို ရောက်ရှိလာသူ အသက်ကြီးငယ် အရွယ်အရွေးအပေါင...
Internet Journal အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၄၁)
ယခုတစ်ပတ်ထုတ် အင်တာနက်ဂျာနယ်ကို အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဗျ.... Issue Date IJ Main Mobile Education Electronic Tech Inside အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၄၁) ၂၂.၁၀.၂၀၁၂ ...
The Voice Weekly Vol.8/No.42 PDF Download
ဒီတစ်ပတ်ထုတ် The Voice weekly journal လေးပါ။ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ကြပါဗျာ.... The Voice Weekly Vol.8/No.41 PDF File ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါပြီ။ https://www.dropbox.com/sh/3599hec7n40923y/ZvgXV39n6...
Mobile Guide Journal Issue 75 download
ဒီတစ်ပတ်ထုတ် mobile guide journal လေးပါ။ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဗျာ... ဒေါင်းရန်လင့် အောက်မှာပါ။ http://www.mediafire.com/?x9dqjhc3lna19p...
ဒီတစ်ပတ်ထုတ် Internet Journal အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၄၀) ကို အောက်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီဗျာ... Issue Date IJ Main Mobile Education Electronic Tech Inside အတွဲ(၁၃)၊ အမှတ်(၄၀) ၁၅.၁၀.၂၀၁၂ ...
ဒီတစ်ပတ်ထုတ် The Voice Weeky Journal လေးပါ။ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဗျာ....
ဒီတစ်ပတ်ထုတ် Mobile Guide Journal လေးပါ။ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဗျာ.....
Windows7တွင် Application များကို Unstall လုပ်နည်း
ကဲ... ဒီနေ့အတွက် ကျွန်တော် ရေးတင်ပေးလိုက်တာကတော့ Windows7မှာ Application တွေကို ဘယ်လို uninstall လုပ်ရသလဲဆိုတာကို e-book လေးရေးပေးထားတာပါ. အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ကြပါဗျာ....
လာရောက်သူအားလုံး မင်္ဂလာပါဗျာ... ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ရက်လောက်က ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ရှမ်းပြည်ကို သွားခဲ့ပါတယ်. ရှမ်းတောင်တန်းကြီးတွေကလည်း လှ ရာသီဥတုကလည်း အေးအေးနဲ့ မန်းလေးကိုတောင် မပြန်ချင်ဘူးဗျာ. ဒါပေမယ့်လည်း အလုပ်ကိစ္စတွေကလည်းရှိတော့ မနေ့ကပြန်လာခဲ့ပါတယ်. ရောက်ရောက်ချင်း ပင်ပန်းနေတာနဲ့ ပိုစ့်မတင်ဖြစ်ဘူးဗျာ.. ကဲ.. အခု ကျွန်တော် ပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့ နေ့တိုင်း ပိုစ့်တွေတင်နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားမှာပ...
အားလုံး မင်္ဂလာရှိသော နံနက်ခင်းလေးပါ...!!!ကျွန်တော် ဒီနေ့နေ့လည်ကျရင် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းက ရွာလေးတစ်ရွာကို ခရီးထွက်ပါမယ်ဗျာ.... အဲဒီရွာလေးမှာရှိတဲ့ စာသင်ကျောင်းလေးမှာ ကလေးငယ်တွေကို အာဟာရ ကျွေးရင်းနဲ့ စာအုပ်နဲ့ခဲတံ သွားလှူမလို့ပါ။ နှစ်ရက်လောက်တော့ ကြာမယ်ထင်ပါတယ်။ ပြန်လာမှ ပုံတွေကို မျှဝေပေးမယ်ဗျာ... နှစ်ရက်လောက် Online ပေါ် မတက်ဖြစ်လောက်ပါဘူးလို့ ကြိုတင်အကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ် သူငယ်ချင်းတို့ရေ....ရွှေမန်းသားလေး ဝေယံ (နည်းပညာ)၁၂၁၀၁၂ ၀...
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ ဂျာနယ်ကတော့ Mobile Guide Journal ပါ။ Mobile နဲ့ပတ်သက်သမျှကို စုံစုံလင်လင် ဖော်ပြပေးနေတဲ့ အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ်လေးကို အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဗျာ.....
စာအုပ်အမည် - စာပေမှတ်တိုင်များကို ဖြတ်သန်းခြင်း ရေးသားသူ - မောင်ခင်မင်(ဓနုဖြူ) ဒေါင်းရန်လင့် - http://minus.com/l9EpsGvLM6mW...
စာအုပ်အမည် - ဆယ့်နှစ်ရာသီပန်းများနှင့် ပွဲတော် ရေးသားသူ -ခင်မျိုးချစ် ဒေါင်းရန်လင့် - http://minus.com/l09wpD5uL7oE...
ကျွန်တော်လည်း အခုတလော အလုပ်နည်းနည်းရှုပ်နေတယ်ဗျာ.. နေ့လည်တုန်းက ခဏလေးနားနေတုန်း mail စစ်ကြည့်လိုက်တော့ မေးထားတာလေးတစ်ခုတွေ့လို့ပါ. Myanmar2အတွက် keyman နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာလေးတစ်ခုကို မေးထားလို့ပါ။ ကျွန်တော် နောက်ပိုင်းကျရင် အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးပါ့မယ်ဗျာ... အခုတော့ ကျွန်တော်လည်း လက်ရှိသုံးနေတဲ့ မြန်စံ software လေးကို အသုံးပြုကြည့်ဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ....
Windows7ကို Activate ဖြစ်အောင် Activator ဖြင့် ပြုလုပ်နည်း (E-book)
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကတော့ Windows7ကို Activate လုပ်တဲ့ Activator လေးပါ။ အသုံးပြုပုံစာအုပ်ကတော့ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ။ http://min.us/lDmuF17cRFdne Software ကို အောက်မှာသွား ဒေါင်းလိုက်ပါ။ http://filecloud.io/ckq6a2...
စာအုပ်အမည် - ငယ်ပေါင်းကြီးဖော် ရေးသူ - မောင်ခင်မင် (ဓနုဖြူ) ဒေါင်းရန်လင့် - http://minus.com/lMoyKMG1TDna...
စာအုပ်အမည် - ယိုးဒယားမှရရှိသော ယဉ်ကျေးမှုများ ရေးသူ - ဦးဖေမောင်တင် ဒေါင်းရန်လင့် - http://minus.com/lKBdhjjR7co4...
စာအုပ်အမည် - ခေတ်စမ်းကဗျာများ (၁) ရေးသူ - မြန်မာပြည်ပညာပြန့်ပွားရေးအသင်း ဒေါင်းရန်လင့် - http://minus.com/lOfvMCiMPSnE...
တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ဒီလအတွင်းမှာငွေကံ တအားကောင်းနေမယ်။ နာမည်ဂုဏ်သတင်း တက်စရာတွေလည်း ကြုံမယ်။ နိုင်ငံခြားခရီး၊ လူမျိုးခြားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်တွေ အကျိုးပေးအောင်မြင်မယ်။ ၂၇- အတွဲလိုက်ပူးပြီးတော့ စတဲ့ ထီလက်မှတ်တွေ ထိုးသင့်ပါတယ်။ အထည်၊ ထီး၊ ဖိနပ်၊ ဓာတ်ပုံ၊ လျှပ်စစ်၊ ကား၊ ကွန်ပြူတာ၊ ကျောက်၊ ကင်မရာလုပ်ငန်းများ၊ တိုးချဲ့သင့်တဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ အလှူပွဲ မင်္ဂလာပွဲတွေ ကြုံရတတ် ပါတယ်။ အဲဒိနေ့မှာ ထီဖိထိုးသင့်ပါတယ်။ စပ်တူ စာချုပ်ကိစ္စ တွေမှာတော့ မရေမရာ ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ မြေကိစ္စ၊ အမွေကိစ္စ၊ ဖုန်းကိစ္စများကိုတော့ ခေတ္တဆိုင်းငံ့ ထားသင့်တဲ့အချိန်ပါပဲ။...
ဆက်ပြီးတော့ အတွဲ(၃)ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ. လိုင်းကမကောင်းတော့ သည်းခံရတာပေါ့ဗျာ.. ပါရမီဖြည့်ခြင်းတစ်မျိုးဘဲလေ.အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ကြပါဗျာ.....
Ubuntu OS ပေါ်မှာ Unicode Font သို့မဟုတ် Zawgyi Font နဲ့ ရေးထားတဲ့ Text File တွေကို အပြန်အလှန် ပြောင်းနိုင်ရန်အတွက် Font Converter ကို အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် Python Module ကို အသုံးပြုထားတာဖြစ်လို့ Python-Myanmar ဆိုတဲ့ Package ကို ဦးစွာ ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပြီး ထည့်သွင်းပေးထားဖို့တော့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Font...
သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ Data Center တွင် တိုက်ရိုက်ထားရှိသော Hyper-V Windows Virtual Private Server (VPS) နှင့် UK Based Cloud Server များ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသည့် myanmarvps.com တွင် ယခုလကုန်မှစ၍ လစဉ်ကြေးများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ပေးသွင်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယခင်က လစဉ်ကြေး၊ နှစ်စဉ်ကြေးများကို Myanmar VPS ရုံးခန်းတွင် လာရောက် သွင်းရသော်လည်း...
Facebook တွင် Dropbox ဖိုင်များ ဝေမျှ အသုံးပြုနိုင်မည်
Facebook အသုံးပြုသူများသည် Dropbox ဝန်ဆောင်မှုတွင် သိုလှောင်ထားသည့် content များကို Facebook group များတွင် ဝေမျှနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း Facebook နှင့် Dropbox ကုမ္ပဏီတို့မှ ကြေညာခဲ့သည်။ Facebook အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ Dropbox account များကို ချိတ်ဆက်လိုက်ရုံနှင့် ၎င်းတို့၏ homepage တွင် icon တစ်ခု ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး...
Android ထုတ်ကုန်ကို Webcam တစ်ခုအနေဖြင့် အသုံးပြုခြင်း
ဒီတစ်ပတ် ဖော်ပြပေးမယ့် နည်းလမ်းကိုတော့ Built-in Webcam မရှိတဲ့ PC ပေါ်မှာ Android ထုတ်ကုန်ကို Webcam တစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြုလုပ်ပုံကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ...
အွန်လိုင်း ဖုန်းခေါ်နိုင်သော Viber စနစ်ကို အင်တာနက် အသုံးမပြုနိုင်သည့် CDMA 450MHz ဖုန်းများတွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်
Viber စနစ်ကို အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်သည့် ဖုန်းများတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်ခဲ့သော်လည်း၊ ယခုအခါ အင်တာနက် အသုံးမပြုနိုင်သေးသည့် CDMA 450 MHz ဖုန်းများတွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားသည့် ကွန်ပျူတာ လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကွန်ပျူတာဖြင့် Viber application ကို ကွန်ပျူတာတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ...
Swinburne University of Technology မှ ပေးအပ်သည့် ပညာသင်ဆုများအကြောင်း လေ့လာနိုင်မည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်
www.swinburne.edu.au တွင် SUT အကြောင်းနှင့် SUT မှ ပေးအပ်မည့် ပညာသင်ဆုများ အကြောင်းကို ပြည့်စုံစွာ လေ့လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။...
အွန်လိုင်း ငွေပေးချေမှုဖြင့် Domain နှင့် Web Hosting များ ဝယ်ယူနိုင်ရန် စီစဉ်
အွန်လိုင်းမှ ငွေပေးချေကာ Domain နှင့် Web Hosting များကို ဝယ်ယူနိုင်ရန် စတင် ဝန်ဆောင်မှု ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း World Wide Myanmar မှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ကိုမင်းအောင်က ပြောသည်။&nbs...
နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများ ၊လိုအပ်သော Software များ အကူအညီတောင်းလိုပါက gamemaster.master007@gmail.com သို့ mail ပေးပို့ပြီး မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်. အဖြေများကို ဤ Website တွင် ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်. လာရောက်လည်ပတ်သူများကို ကျေးဇူးတင်ရှိလျက်............... ရွှေမန်းသားလေး (နည်းပညာ) ®
Mozilla Firefox 15.0.1 Download
ရွှေမန်းသားလေးရဲ့ တစ်ခြားသော ဆိုက်များ
ကြိုက်လျှင် Like နှိပ်ခဲ့ပါ...
ဒီ ဘလော့လေးထဲမှာ ရှာချင်ရင်...
မြန်မာသတင်းများ ဖတ်ရှုရန် (http://www.searchmyanmar.com)
http://www.searchmyanmar.com ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှာ ဖြစ်ပေါ် ပြောင်းလဲနေတဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို တစ်ထိုင်...
2012 - ခုနှစ်အတွက် ရာသီခွင်အလိုက် ဟောစာတမ်းစာအုပ်များ
အွန်လိုင်းပေါ်တွင် အဆင်သင့် တွေ့ရှိရသော ဆရာ စံဇာဏီဘို၏ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွက် ဟောစာတမ်း စာအုပ်များကို ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံး ပျော်ရ...
http://www.myanmarmobileapp.com မြန်မာနိုင်ငံက မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုကြသူတွေအတွက် မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်တွေ၊ မေးမြန်းချက်ေ...
ဒေါက်တာ ထွန်းလင်း(ဘုတလင်) by Myit Makha Mediagroup on2Aug, 2012 တနင်္ဂနွေ မမျှော်လင့်သောအရာတွေဖြစ်ပေါ်လာမည်။ အထင်လွဲမှားမှုတွေဖြစ်မည်။ ...
၂၀၁၂ခုနှစ် မေလ အတွက် ဗေဒင် ဟောစာတမ်း
ဒီလအတွက်ဟောစာတမ်းကတော့ ဆရာမျိုးဟန်ကို၏ ဟောပြောချက် ဖြစ်ပါတယ်.. ဆရာဟိန်းတင့်ဇော် ခရီးသွားနေသောကြောင့် တင်တာနောက်ကျသွားပါတယ်... အားလုံးကိုခင်...
ကျွန်တော် လူငယ်စာရေးဆရာ သိုးဆောင်းရဲ့စာအုပ်တွေကို တော်တော်ကြိုက်တယ်ဗျ.လူငယ်စာရေးဆရာပီပီ သူရဲ့ဝတ္ထုတွေက တော်တော်ထိမိတယ်. ကျွန်တော့်လို သို...
၂၀၁၂-ခုနှစ် ဇွန်လအတွက် ကံကြမ္မာဟောဟာတမ်း
တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် ဒီလအတွင်းမှာ အဆင်မပြေလွဲချော်မှု့တွေ များနေမယ်။ ဟိုဟာလုပ်ရတော့မလိုလို ၊ဒီဟာလုပ်ရတော့မလိုလိုနဲ့ အချိန်ကုန်နေတတ်ပါ...
ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
. တနင်္ဂနွေသားသမီးများ တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် ယခုလမှာ ကံဇာတာ အကောင်းအဆိုး ရောနှောနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အိုးအိမ် ခြ...
Facebook နှင့်ပတ်သက်သမျှ (17)
Ubuntu OS (10)
နည်းပညာ သတင်း (202)
ဘ၀ အပိုင်းအစများ (6)
ဘ၀အတွက် အားဆေးများ (56)
လေ့လာစရာ Website ကောင်းများ (45)
မြန်မာစာ အထူးပြုများအတွက် (9)
၀ယ်ယူနိုင်စရာ နည်းပညာပစ္စည်းများ (69)
ကြားဖြတ် သတင်း (28)
ထိပ်တန်း Android Application Download ဝက်ဘ်ဆိုက် ၁...
[X] Choose Font Here Zawgyi-OneUnicode
Posted by naihan at 06:45